Laydhka Nalalka ee TV-gaaga ama ku ilaali Ultra-High CRI 6500K LED - Nalalka Nalalka ee MediaLight
Maraakiibta 2-maalin oo bilaash ah
iftiin kasta oo eex ah!
2-6 maalmood gudahood
& 2-sano loogu talagalay LX1
9 am-4pm galabnimo Isniin-Jimce
Ku soo dhowow raaxada 6500k
Nidaamka Laydhka D65 MediaLight Mk2 eexda la moodo ayaa ah horumar laga gaadhay nalka xirfadeed iyo hoyga tiyaatarka eexashada ee ka dhigaya TV-gaaga mid kafiican kana yareeya culeyska indhaha adigoon saameyn xun kuyeelanayn saxsanaanta sawirka. Qaar kale waxay dhihi karaan 6500k, laakiin waxay ka hooseeyaan saxnaanta looga baahan yahay bandhigyada maanta aadka u-karti badan.
Arag inbadan, sifiican u arag
Nalalka taxanaha ah ee 'MediaLight Mk2 Laydh Lights, lightbbs', iyo laambadaha miiska, dhammaantoodna leh isla qaybsi isku mid ah D65 awoodda korantada. Dhammaantood waxay leeyihiin CRI heer sare ah ≥ 98 Ra
Si fiican uga faa'iideyso shineemada gurigaaga Spears & Munsil UHD HDR Benchmark UHD Blu-ray disc
Qiimaha ugu fiican ee ISF-shahaado la siiyay eexasho
LX1 6500K Nalalka Nalalka ayaa ah xulashada ugu habboon isku-dheelitirka isku-dheelitirka ee saxsanaanta iyo awoodda. Nalalkaan xagjirka ah ee ISF-Certified-ka waxay ka bilaabanayaan qiimaha hoose ee $ 14.95 (oo lacag la'aan ah 2-Day Fedex USA maraakiibta!) Marka layaab malahan inay si dhakhso leh u iibinayaan!
Ku soo bandhigida barnaamijka 'Ideal-Lume Pro' ee loo yaqaan 'MediaLight Desk Lamp' oo loogu talagalay midabeeyayaasha. Nalalka la kontoroolo ee dusha koontaroolkaaga, iyo midna halka aadan rabin
Weligaa uma baahnid inaad daawato TV-ga la'aantiis!
Ugu dambayntii ku raaxayso daawashada aflaanta TV-gaaga iyada oo aan indhaha la saarin oo aan laga walwalin in laydhku sax yahay iyo in kale. Ka tirtir waxyaabaha ku mashquulinaya, sida iftiinka ka soo baxa laambadaha, ama ilaha iftiinka CRI ee hooseeya ee keena sawir aan sax ahayn. Maheli doontid xalka saxda ah meelkasta, oo waxaas oo dhan waxaa cadeeyay Hay'ada Sayniska Sawirka.
Waxaad raadineysay nal eex aan jebin bangiga. Soo bandhigida LX1 ee sameeyayaasha 'MediaLight'. Waan ognahay sida ay uga careysiiso ca ...
Taxanaha 'MediaLight Mk2': Iftiin Wanaagsan Oo Loogu Tala Galay Deegaanada Muuqaalka Midab-Halis Ah Miyaad daawaneysay TV khaldan noloshaada oo dhan? Iyadoo ...
Heerka warshadaha ee nalka nalka
Nalalkayaga eex-darrada ayaa loo qaabeeyey si loo caddeeyo qeexitaannada leh dio-yada iftiinka iftiinka SMD ee tayada ugu sarreeya iyo saxsanaanta
Wax soo saar kasta oo MediaLight ah, laga soo bilaabo $ 32 MediaLight Eclipse ee kombiyuutarada ilaa MediaLight Pro waa ISF-Shahaado sax ah heerkulka midab D65 saxan iyo muujinta midab sarreysa (CRI)
Qeyb kasta oo ka mid ah nidaamkaaga nalalka eexashada ee 'MediaLight' wuxuu daboolayaa 5 sano laga bilaabo taariikhda iibsiga sabab kasta oo male ah. Tani kuma koobna cilladaha soo saaraha. Waxay sidoo kale daboolaysaa rakibidda rakibida, burburka shilka iyo xatooyada
"Ugu dambeyntiina, MediaLight Mk2 Flex ayaa laga yaabaa inuu yahay midka ugu fudud, ugu jaban uguna wanaagsan ee aad ku sameyn karto dejinta shineemada gurigaaga."
"[MediaLight] waxay shaqadeedu ka fiican tahay wax kasta oo tartanku hadda bixiyo."
Nidaamka laydhka 'Medialight Flex Mk2 Bias' (waa) midka ugu fudud ee $ 60 ilaa $ 100 doolar waxaan kugula talin lahaa inaad kubixiso tiyaatarka gurigaaga, gaar ahaan haddii aad waqti siisay inaad ku hagaajiso shaashaddaada. Aad loogu taliyay!
Indiana Lang, Sirta Tiyaatarka Guriga & Aaminaad Sare
Midabeeyaha xirfadleyda ah Ollie Kenchington wuxuu sharxayaa faa iidooyinka saxda ah ee loo ekeysiiyey D65 eexasho toosan oo laga helo MediaLight
Nalalka aan sax ahayn = sawir aan sax ahayn
Si dhib leh ayaad u qaabeeysay muuqaalkaaga, markaa maxaad "u yareyn weyday" iftiin aan sax ahayn?
MediaLight waxaa soo saaray Shaybaarka muuqaalka, daabacayaasha Spears & Munsil Benchmark. Waxaan ogaanay in qofna uusan samaynaynin nal eex toosan oo la awoodi karo taasna waxay siisay CRI sare iyo CCT sax ah (heerkulka midab isku xiran) ee ay u baahan yihiin midableyda xirfadleyda ah iyo hiwaayaddayaasha shineemooyinka guryaha dhamaadka-sare leh.
Ka taxaddar nalalka eexda
Wax kasta oo aad u baahan tahay waxay ku jiraan sanduuqa
Waxay noo ahayd muhiim inaan ka dhigno midda 'MediaLight' mid sax ah intii suurtagal ah ee xirfadleyda iyadoo loo fududeynayo macaamiisha guryaha inay ku rakibaan TV-yada.
Uma baahnid qalab. Ma jiraan wax la iibinayo, ma jiraan fiilooyin la jarayo, mana jiraan wax dheeraad ah oo la iibsado. (Ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo loo yaqaan 'MagicHome WiFi dimmer' ayaa la heli karaa, laakiin looma baahna in la isticmaalo MediaLight).
Stri Xargaha fudud ee CRI iyo Super-High CRI (≥98-99 Ra, waxay kuxirantahay tusaalaha)
Pter USB AC Adapter (wuxuu ka socdaa dekedda USB-gaaga muuqaalkaaga ama TV-gaaga). Dayax madoobaadka waxaa kujira fidin USB 4ft ah
V 5V infrared PWM dimmer, oo la jaan qaadi kara kontoroolayaasha guud ee fog, buundooyinka IR iyo qarxayaasha
Control Kontaroolka fog ee infraredka (oo la jaan qaada meelaha fog fog sida Harmony) oo loogu talagalay dadka oo dhan laakiin moodeelka Mk2 Eclipse computer Monitor, oo ay ku jiraan cabir gudaha ah
Waxaa laga yaabaa 18, 2021 Jason Rosenfeld
Faallooyinka Nalalka ee MediaLight ee Dhawaan
Dhowr macaamiil ayaa nagu bogaadiyey sida qolkeennu u eg yahay, MediaLight-na waa qayb weyn oo ka mid ah taas.
Wax soo saarka sare. Adeegga macmiilku aad buu u fiicnaa. Xajmiga TV-ga dartiis, waa inaan sugaa inta ay wiilasheyda 2 ka imaanayaan guriga Ista si aan TV-ga uga soo jiido buurta darbiga oo aan sariirta ugu jeediyo. Markii aan su'aal qabay, taageerada MediaLight ayaa i caawisay EASTER si loo dhammeeyo. Rakiibintu way fududahay. Iftiinka waxaa laga quudiyaa dekedda USB. Nalalka ayaa soo baxa oo ka baxa iyada oo TV-gu shidan yahay oo deminayo Muuqaal weyn
Wax walba oo ku saabsan alaabooyinka Medialight waa kuwa ugu sarreeya. Waxay leeyihiin wax soo saar aad u wanaagsan, oo dareemaya tayo sare, heerkulka nalka waa weyn yahay, fiilooyinka iyo furayaasha waa kuwo aad u fiican, kuwa fogna si fiican ayey u shaqeeyaan si ay u hagaajiyaan iftiinka. Kama iibsan doono nal kale eex ah codsi kasta.
Saxiix noo cusbooneysiinta MediaLight iyo LX1
Weligeen wali kamaan dirin emayl, laakiin taasi macnaheedu maahan inaanan dirin doonin!